Naanoo warshaan Baala Shaayee Gumaroo itti argamu, Iluu Abbaa Booraa
Komiin Warshaa Baala Shaayee Gumaroo fi Jiraattota Godina Iluu Abbaa Boor Aanaa Aallee gidduu jiru kan bara dheeraati. Jiraattonni Naannoo Warshichaa; Warshaan kun haala qacarrii irratti loogii jiraattota naannoo irratti raawwata; darbees dhiyeenya kanammoo lafa qonnaan bultootaa akkasumas lafa Ummataatti daangaa darbuu jiraattonni komii qaban kaasu.
Dhimma kanaan wal qabatees jiraattonni naannoo warshaa kana jiraatan gaaffii gaafataa ka turan yoo ta’u, ji’a lamaan duras warshaa kanarraa faayidaa nuu malu hin argannee jechuun hiriira bahanii gaaffiilee dhiyeeffatanii turan. Hiriira kana boodas bakka bu’oonni hawaasaa Gaggeessitoota Warshichaa waliin mariyatanus warshichi garuu osoo gaaffii nuti kaafne deebisuu qabuu humna waraanaa fidee nurra qubachiisee jedha jiraataan naannoo warshichaa tokko.
Torbee darbe kana keessas humnootni raayyaa ittisaa kun isaa fi dargaggoota mana keessa turan reebanii qabeenyallee barbadeessuu dargaggoon Acaaluu Isheetuu jedhamu VOA’f himeera.
Komiin jiraattotni kaasanka dhibiin, warshaan kun beenyaa gahaa utuu hin kennin bara 2000tti gandootii naannoo warshichaa jiranirraa humnaan qonnaan bultoota buqqisee lafa fudhateera jedhu. Keessumaa gandoota baadiyyaa Saggii fi Oobee jedhaman irraa warshaan kun seeraan ala akka lafa fudhate jiraattonni ni dubbatu. Dassaaleny Zawudee ganda Oobee ka warshaa kanatti aantee jirtu keessa jiraata; lafti maatii isaa gara hektaara 16 tilmaamamu warshaa baala shaayee gumaroon waan jelaa fudhatameef, maatiin isaa bittinnaawuu dubbata.
‘Lafa hektaara 16 beenyaa tokko malee kaartaatu gale jedheetiyyuu ofiisaatiini fudhate. Lafa sanarraa kan nuyi qabnu, baargamoo hin qabna turree, buna qabna nuyi, irratti jiraataa turree jechuudha. Maatiin keenyammoo; abbaan keenya sababiidhuma kanarraa kan ka’e maraate.’
Komii jiraattonni naannoo kaasan kana bakka bu’aa warshaa baala shaayee gumaroo ka ta’an obbo Addis’n gaafachuuf yaallus, Obbo Addis garuu ‘Saba himaaf odeeffannoo kennuu hin danda’uu’ jedhan.
Waa’ee jiraattonni komataa jiran kanaas waajjira Investimentii Aanaa Aalleetti itti gaafatamaa Deeskii ka ta’an Obbo Fiqaaduu Asmaraa yoo gaafannu, ‘warshaan kun walii galteen isaa bulchiinsa mootummaa federaalaa waliin kan mallatteeffame waan ta’eefi, Waajjirri investimentii Aanaa faayidaa uummata naannoo warshichaa jiran kabachiisuu irratti itti gaafatamni inni qabu murtaa’aadha illee jedhan.
Waa’ee Raayyaan Ittisaa warshicha keessa qubachiifamuu fi Komii lafa warshichi humnaan fudhate jedhu ilaalchisees Bulchaa Aanaa Aallee Obbo Taaddalaa Gaaddisaa gaafannee turre, isaanis komii waa’ee lafaa ka’e ka ganda Saggiirra ture furuu dubbatanii, dhimmi lafa ganda Oobee irraa warshichi qabiyyee isaatti dabale qorannaarra akka jiru dubbatani. Waa’ee Raayyaa ittisaa garuu Bulchiinsi Naannoo quba hin qabu jedhan.
Warshaan Baala Shaayee Gumaroo duraan qabeenyummaan isaa kan harka mootummaa ture yoo tahu, bara 1994 tti Kaampaanii MIDROC f gatii haga yoonaa sabaaf ifa hin godhaminiin Abbaa Qabeenyaa dhuunfaaf ka gurgurameedha.